Fanantenan'ny Tetibola fizahan-tany any India amin'ny taona 2021
Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » India Travel News » Fanantenan'ny Tetibola fizahan-tany any India amin'ny taona 2021
teti-bolan'ny fizahan-tany Inde
Ny antsasak'ireo miasa amin'ny sehatry ny fizahan-tany any India dia very asa tanteraka na miala sasatra nefa tsy karama. Manampy hatramin'ny 40 tapitrisa izany ezahana ho tafavoaka velona amin'ny vokatry ny valanaretina COVID-19 amin'ny fivelomany manokana sy amin'ny toekarena.
Ny filohan'ny Fikambanan'ny Travel Agents of India (TAAI), Jyotic Mayal, dia nilaza momba ny fampandrosoana ny teti-bolan'ny fizahan-tany any India satria mifandraika amin'ny tetibolan'ny sendikan'ny taona 2021 fa tokony hifantoka bebe kokoa amin'ny fandaniana hahafahana mitombo ara-toekarena. Mino izy fa ny fizahantany dia afaka miteraka fikorianam-bola sy vola azo hanatsarana ny fotodrafitrasa eto amin'ny firenena.
Ny sekretera jeneraly voninahitra an'ny Federasionan'ny Fikambanana ao Fizahan-tany any India & Hospitality (FINO), Andriamatoa Subhash Goyal, dia namoaka fanambarana momba ny toetran'ny indostrian'ny fizahantany any India ankehitriny sy ny tetibolan'ny sendika.
Hoy izy: "[Ny] indostrian'ny fizahantany no indostria voa mafy indrindra. Amin'ireo olona manodidina ny 75 tapitrisa izay miasa mivantana na ankolaka amin'ity orinasa ity - manodidina ny 30 tapitrisa no very asa ary 10 tapitrisa eo no miala sasatra nefa tsy karama.
“Mpiasa fizahan-tany manodidina ny 53,000, mpandraharaha mpizahatany 1.3 lakh, ary mpitatitra fizahan-tany ary mpitari-dia mpizahatany an'arivony no sahirana miaina. Toy ny any amin'ny firenena hafa, [ny] indostrian'ny fizahantany indiana dia tsy nahazo fonosana ara-bola tafavoaka velona avy amin'ny governemanta. Noho izany, manantena izahay fa ity teti-bola ity dia hanome fanampiana kely antsika hahafahan'ity indostria ity hamelombelona indray ary asa an-tapitrisany no ho voatahiry. ”
Ny andrasana amin'ny indostria amin'ny teti-bola dia:
1. tahan'ny GST fanamiana 10% amin'ny trano fandraisam-bahiny sy trano fisakafoanana manana krédit input.
2. Fanafahana haba amin'ny indostrian'ny fizahantany sy fandraisam-bahiny mandritra ny herintaona mba hahafahan'izy ireo miaina.
3. Ny fandoavam-bola rehetra toy ny herinaratra, saram-pananana, fahazoan-dàlana hitondrana fanafahana mandritra ny fotoana fanidiana.
4. Ny banky dia asaina manome famatsiam-bola / fampindramam-bola laharam-pahamehana farafahakeliny 5% mandritra ny 5-10 taona farafaharatsiny.
5. Fanafoanana ny haba GST / hetra ho an'ireo orinasa hanao fivoriambe ao India fa tsy any ivelany.
6. Ny vola miditra amin'ny indostrian'ny fizahantany dia ekena tanteraka ho karama fanondranana raha oharina amin'ny fanondranana entana.
7. Indostrian'ny fizahantany sy fandraisam-bahiny homena toerana misy fotodrafitrasa.
8. Ny indostrian'ny fizahantany dia hapetraka ao amin'ny lisitry ny governemanta miaraka aminy.
9. Ampitombo ho 10% ny vola azo avy amin'ny fifanakalozam-bola vahiny amin'ireo mpikambana ao amin'ny indostrian'ny fizahantany mandritra ny 5 taona farafahakeliny hanampiana azy ireo ho sitrana ny krizy COVID-19.
10. Hatsangana ny tahiry famolavolana MICE manerantany hahafahan'i India manolo-tena hahazo fihaonambe, fihaonana ary hetsika iraisam-pirenena bebe kokoa hatao any India.
Notsapaina herinandro tsara taorian'ny nahazoana ny tifitra vaksinin'ny Pfizer roa
Southwest Airlines dia nanondro ny toerana tsara indrindra hiasana amin'ny fitoviana LGBTQ amin'ny taona manaraka